Sannado ka hor, waxaan u haajiray otomaatigayga suuqgeynta si caddaalad ah oo caan ah oo si weyn loo qaatay (ma aha Salesforce). Kooxdaydu waxay qorsheeyeen oo horumariyeen ololeyaal kobcin ah oo run ahaantii waxaan bilaabaynay inaan wadno qaar ka mid ah taraafikada hoggaaminta weyn… ilaa masiibadu ka dhacdo. Madalku wuxuu sameynayay casriyeyn weyn wuxuuna si lama filaan ah u tirtiray tiro macmiil xogtiisa, oo ay ku jirto annaga.
In kasta oo shirkaddu lahayd heshiis heer adeeg ah (SLA) taas oo damaanad qaaday waqtigeedii, ma lahayn gurmad iyo soo kabasho awoodaha xisaabta. Shaqadayadu way dhammaatay oo shirkaddu ma lahayn kheyraad iyo awood ay ku soo celiso heer xisaabeed. In kasta oo nashqadahayagii dib loo dhaqan gelin lahaa, dhammaan rajadayada iyo macmiilkayaga waxqabad waa la tirtiray. Dabcan ma jirin qaab lagu soo saaro xogtaas muhiimka ah ee qiimaha badan. Waxaan ka shakisanahay inay naga luntay boqolaal kun, haddii aysan ahayn malaayiin doolar oo soo gala. Barxadda ayaa naga saartay qandaraaskeenna isla markiibana waan ka baxay barnaamijkoodii lammaanaha.
Shirkadaha sida Salesforce ayaa ku celcelinaya, soo cusboonaysiinaya, isla markaana isku daraya heer xawaare intaas le'eg leh boqolaal horumariyayaal ah oo ay tahay wax aan macquul ahayn in la horumariyo lana ilaaliyo saldhigga isbarbar -dhigga ee macaamiisha si loogu kaydiyo loona xafido xogtooda. Waxay diiradda saarayaan xasilloonida nidaamka, waqtiga-dheer, amniga, iyo hal-abuurnimada…
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in Salesforce aysan ahayn sababta koowaad ee luminta xogta. Dhab ahaantii, anigu shakhsi ahaan uma arkin iyaga oo si lama filaan ah u burburiyay xogta macmiilka. Xog -goynta ayaa marmar dhacday, laakiin ma arag musiibo (garaac qoryo). Sidoo kale, Salesforce waxay leedahay xoogaa dhoofitaan xog xog badan oo la adeegsan karo, laakiin taasi maahan mid ku habboon maadaama ay u baahan tahay dhisidda kayd, jadwal, warbixin, iyo awoodo kale oo ku xeeran si ay u noqoto mid buuxda xal ka soo kabashada musiibada.
Xirfadlayaasha - dambiilayaal dambiileyaal siyaasadeed ama bulsho ku kacsan soo bandhiga ama baabi'iya xogta.
Codsiyada Xun -iyadoo la isweydaarsanayo codsiyada dhinac saddexaad, waxaa had iyo jeer jirta fursad ah in madal si lama filaan ah u tirtirto, dib ugu qoro, ama u kharribto xogtaada muhiimka ah.
OwnBackup waxay si firfircoon uga hortagtaa inaad lumiso xogta Salesforce CRM ee hawlgalka muhiimka ah iyo metadata oo leh keydin otomaatig ah iyo soo kabasho deg-deg ah oo aan walwal lahayn…